अजय देवगनको ‘मैदान’मा कीर्तिलाई प्रियामणिले रिप्लेस गरिन् ! « News24 : Premium News Channel
अजय देवगनको ‘मैदान’मा कीर्तिलाई प्रियामणिले रिप्लेस गरिन् !
प्रकाशित मिति : Jan 19, 2020
काठमाडौं, ०५ माघ । अजय देवगनको आगामी फिल्म ‘मैदान’ हो । ‘मैदान’ भारतीय फुटबल टिमको कोच सइद अब्दुल रहिमको जीवनीमा आधारित फिल्म हो ।
यस फिल्मको मुख्य अभिनेत्रीको रुपमा साउथ अभिनेत्री कीर्ति सुरेशलाई फाइनल गरिएको थियो, तर पछिल्लो जानकारी अनुसार कीर्ति सुरेशलाई अर्की अभिनेत्री प्रियामणिले रिप्लेस गरिदिएकी छन् ।
रिपोर्टका अनुसार ‘मैदान’ फिल्मको लागि नेशनल अवार्ड विनिङ अभिनेत्री प्रियामणिले कीर्ति सुरेशलाई रिप्लेस गरेकी हुन् । अभिनेत्री प्रियामणि साउथ फिल्मका साथै वेब शो ‘द फ्यामिली म्यान’ पनि आइसकेकी छन् । जहाँ उनलाई मनोज बाजपेयीको अपोजिटमा कास्ट गरिएको थियो ।
पछिल्लो समय अजय देवगनको फिल्म ‘मैदान’मा उनको कास्टिङको विषयमा आधिकारिक भनाइ भने आएको छैन । ‘मैदान’ फिल्मसँगै प्रियामणि कंगना रनौतको फिल्म ‘थलाइवी’ मा पनि देखिदैछन् । यो फिल्ममा उनी शसिकलाको भूमिकामा देखिदैछन् । साथै उनी भनुष स्टारर् ‘असुरन’को तेलेगु रिमेकमा पनि देखिदैछन् ।
यता अभिनेता अजय देवगन र कीर्ति सुरेशको नयाँ पेयरिङलाई लिएर फ्यानहरु निकै उत्साहित थिए । तर, मिति नमिलेकै कारण उनीहरुको अनस्क्रिन जोडी बन्न पाएन ।
अभिनेत्री प्रियमणिको लागि ‘मैदान’ पहिलो हिन्दी फिल्म हो । यसै फिल्ममार्फत उनले बलिउडमा डेब्यु गर्न लागेकी हुन् । मैदानलाई अमित शर्माले एक्शन–कट गर्दैछन् । फिल्मलाई २७ नोभेम्बर २०२० मा दर्शकमाझ रिलिज गर्ने निर्माण टिमको योजना रहेको छ ।
‘नेपाल फोटो कन्टेस्ट’का मन छुने उत्कृष्ट तस्वीरहरु प्रदर्शनमा
धनगढीमा साहित्य महाेत्सवकाे राैनक, विश्वभरिबाट नेपालीभाषी साहित्यकार आउने क्रम जारी
लोयल्टी कप फुटबलको उपाधि लिटिल एन्जल्सलाइ
access_time 7:37 pm
काठमाडौं, १६ फागुन । लिटिल एन्जल्स (एलए)ले दसौं लोयल्टी कप अन्तरविद्यालय जुनियर छात्र फुटबल प्रतियोगिताको
तारा आचार्य, विराटनगर, १६ फागुन । उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले वामदेव गौतमलाई प्रक्रिया पु¥याएर
विनय तिम्सीना, इलाम, १६ फागुन । इलामको ठूलो टुँडिखेलमा विहीबारबाट सुरु भएको छैटौँ संस्करणको माइभ्याली